Gonjiam: Haunted Asylum ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
ဒီကားလေးကကိုရီးယား horrorရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ဒုတိယလူကြည့်အများဆုံးရုပ်ရှင်ပါ
Rating မှာလည်း IMDb 6.2/10,Rotten tomatoes 80%,star2.com 7/10ထိရရှိထားပါတယ်
စရိုက်တနြ်းကUS $2.28 millionပဲအသုံးပြုထားပေယ့်Box officeမှာUS$19.9millionထိရရှိခဲ့တဲ့ကားပါ
ဒီဇာတ်ကားဇာတ်လမ်းတည်ထားတဲ့ ဆေးရုံက CNNကရွေးချယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကာင်းဆုံး၇နေရာထဲမှာပါ ပါတယ်
ဆေးရုံအုပ်က ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကော လူနာတွေကိုကောသတ်ပစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဆောက်အဦးက အိုဟောင်းလာတာရယ် သံတိုင်တွေဆိုလည်း သံချေးတွေ တက်လာတာကြောင့် ခြောက်ခြားစရာကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကတော့ Gonjiam စိတ္တဇဆေးရုံမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရတဲ့ အခန်းနံပါတ်၄၀၂ကိုကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်က ဖွင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်
အဲ့အချိန်မှာပဲ ပင်ပေါင်ဘောလုံးသံ ကြားရပြီး ကျောင်းသားလေး၂ယောက်ပျောက်သွားပါတယ်
”Horror Times” ဆိုတဲ့Youtube channel ကိုဦးစီးတဲ့ ဝူဟာဂျွန်းက စွန့်ပစ်ထားတဲ့ Gonjiam စိတ္တဇဆေးရုံကိုသွားပြီး အခန်းနံပါတ်၄၀၂ကိုဖွင့်ပြီး အထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဖော်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ သူနဲ့အတူ တွဲအလုပ်လုပ်တဲ့ ဆန်းဟွန်း နဲ့ ဆန်းဝူးဆိုတဲ့၂ယောက်ရယ် နောက်ထပ်လေးယောက်ရယ် အားလုံး၇ယောက်စုပြီးသွားဖို့ စီစဉ်ကြတယ်
အခန်းနံပါတ် ၄၀၂ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုကိုကော သူတို့တွေဖော်ထုတ်နိုင်မလား?? ဆိုတာ….
ရှေ့ပိုင်း၂မိနစ်ကျော်လောက်မှာ စာတန်းမထိုးတာက ဗီဒီယိုမှာကော မူရင်းစာဖိုင်မှာကော စာမပါလို့ပါ မူရင်းစာဖိုင်ကိုက တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ အမှားတွေပါရင် သည်ခံပေးပါအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်P
Director: Jung Bum Shik
Openload.co Myanmar600MB Download Soliddrive.co Myanmar600MB Download
Trailer: Gonjiam: Haunted Asylum ( 2018 )